Maxaa sabab u ah xilka qaadista deg dega ah ee Maamulka G/Hiiraan? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maxaa sabab u ah xilka qaadista deg dega ah ee Maamulka G/Hiiraan?
Maxaa sabab u ah xilka qaadista deg dega ah ee Maamulka G/Hiiraan?
Saddexdii sano ee uu jiro Maamulka Hir-Shabeelle waxaa gobolka Hiiraan soo maray maamulo kala duwan,iyada oo loo magacaabay in ka badan lix guddoomiye,waxaana taasi dad badan ay ku dhaliileen madaxda Hir-Shabbeelle.
Hayeeshee Madaxweynaha Hir-shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sababeeyay waxa gobolka Hiiraan kaliya ku koobay isbeddelka dhinaca guddoomiyaha ah,iyada oo Gobolka Shabeellaha Dhexe uu weli guddoomiye ka yahay Axmed Meyre Makaraan oo la magacaabay xilligii dowladii Madaxweyne Xasan sheikh Maxamuud.
Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in sababaha inta badan loo bedeelayo gudodomiyeyasha Gobolka Hiiraan uu yahay maamul xumo iyo cudur ka jira gobolkaas oo u baahan in wadatasho laga sameeyo.
Previous articleDowladda Somalia oo wax ka badashay Arimaha Xajka iyo…
Next articleDEG DEG SL oo lagu bahdilay Sacuudiga, Damacada Qadar ee Galmudug & dagaalka Deni iyo Khayre